डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनानुदिन विग्रदै - Rastrakokhabar
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनानुदिन विग्रदै
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:४७
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । तर सरकारले १७ दिनदेखि अनशन बसिरहेका उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो देखाएको छैन । अस्पतालको शड्ढयामा छटपटाइरहेका केसीको स्वास्थ्य उच्च जोखिममा छ ।
केसीले भोक हडतालको तत्काल अन्त्य नगरे उनको ज्यान कुनै पनि बेला तलमाथि पर्न सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताइसकेका छन् । केसीको मुटुमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । जिउ गल्ने, चक्कर लाग्ने, धड्कन बढ्नेलगायत समस्या उनमा देखिन थालेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भनाइ छ ।
केसीको रगतमा डब्लुबिसी, सुगर र पोटासियमलगायत तत्व घट्दै जानेजस्ता समस्या आएको र उनलाई कुनै बेला भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
विगतमा मुटुमा समस्या देखिएपछि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनमोहन कार्डियोेथोरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्नासमेत भएका थिए । लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध कुनै पनि सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नु हुन्छ । सबै नागरिकले सर्वसुलभ गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेका एउटा सन्तको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता केदार कार्कीको भनाइ छ । सरकारले आवजविहीनको आवाज दबाउन खोजेर जनमतको दुरूपयोग गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जनताले मत दिएर सरकारमा पठाउनुको अर्थ स्वार्थी समूहलाई फाइदा दिलाउन नभई जनहितमा काम गर्न हो । सरकारको मुख्य दायित्व नागरिककोे जिउधनको रक्षा गर्नु हो । एउटा सन्त फकिरलाई खिसिट्युरी गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ ।’
जीवनमरणको अवस्थामा रहेको सत्याग्राही केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सरकार प्रमुख स्वयं सक्रिय हुने गरेको उदाहरण दिँदै कार्कीले तर नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । आजको नागरिकमा समाचार छ ।
Previous Post	भारतमा ८० हजार कोरोना संक्रमित थपिए
Next Post	अमेरिकन फौजीकीरा नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान